"La Mianda" indlwana yamatye eneempawu - I-Airbnb
"La Mianda" indlwana yamatye eneempawu
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguFederica
"ILa Mianda" ibekwe kufutshane nenkuni encinci yayo, ijikelezwe buhlaza kwaye ikufuphi nomsinga. Inkulungwane ye-19 yasekupheleni yamatye kunye nendlwana yomthi namhlanje igcina inkangeleko yangaphambili yendlu kangangoko kunokwenzeka, igxile kumbono wokuphucula kunye nokuphinda kusetyenziswe okukhoyo ngokwembono yendalo kunye nokusingqongileyo. Uninzi lwempahla efunyenwe kwi-attic ibuyiselwe kwaye iifestile zokuqala kunye neengcango ngokungathandabuzekiyo zonyusa ixabiso lazo.
Ukufikelela "eLa Mianda" okokuqala, imvakalelo oziva kwangoko kukuba ngaphakathi kwendawo emnandi.
Indlu ifumaneka kwinkuni encinci yayo, ijikelezwe ngokupheleleyo yindalo kwaye ikufuphi nomlambo omncinci malunga ne-50m ukusuka ekhaya.
Indlu, yalungiswa ngokupheleleyo ngamatye kunye nemithi, sisiphumo sombono wabahlobo abathathu ababekholelwa kule projekthi kwaye bagqiba ekubeni banokunikela kubantu abafuna ukuhlala kuyo.
Iprojekthi yokuhlaziya yayisekwe kolona lungiso lunokwenzeka lwangaphambili lwendawo yokuhlala, ukusukela ekupheleni kweminyaka yoo-1800, kugxilwe kumbono wokuphucula kunye nokuphinda kusetyenziswe izinto ezikhoyo ngokwembono yendalo kunye nokusingqongileyo: umzekelo, uninzi nempahla ngaphakathi zisisiphumo yokubuyiselwa oko safumana ngaphakathi endlwini kunye nokugcinwa ngezinto kunye neengcango original kwamathandabuzo ukwandisa ixabiso layo.
Imixholo engaguqukiyo esiyicetywayo ngaphakathi kwindlu yindalo kunye nokusingqongileyo kwimiba yayo emininzi efana nemithi, amatye, izilwanyana, iintyatyambo, ukurisayikilishwa njalo njalo ...
"I-La Mianda" yimeko engcono kakhulu kwabo bafuna indawo epholileyo kunye neyokuphumla kodwa iindawo ezikufutshane zedolophu ezifana neCeres (ifikeleleke ngeenyawo), iLanzo okanye iTurin. Kwindawo yobuchule ekuvumela ukuba uthathe inzuzo yento iLanzo Valley ibonelela ngayo unyaka wonke. Ukusuka kwiihambo zasehlotyeni ukuya kwizinyusi zokutyibiliza ebusika, ngokungcamla ukutya okuqhelekileyo kunye newayini yendawo.
"La Mianda" ifikeleleka ngokulula ngemoto okanye ngololiwe okanye ngebhasi usebenzisa umgaqo kaloliwe waseTurin-Ceres.
Ithuba lokusebenzisa i-barbecue kwindawo ezinikeleyo yokhuseleko olupheleleyo.
Kufuphi nedolophu yaseCeres, ilali ehlala ezintabeni.
Ukwamkelwa kuya kusoloko kubonelelwa ngumamkeli-ndwendwe, naye okhoyo ngexesha lokuhlala kweendwendwe zakhe ukuze angenelele kuyo nayiphi na imfuneko.